Manonofy saka - fantatrao ve ny dikan'izany? | Bezzia
Azo antoka fa isaky ny mifoha ianao dia mieritreritra izay rehetra nofinofinao. Na dia misy aza ny olona tsy mahatadidy ny nofinofiny, ny hafa kosa manana azy ireo tena manatrika mandritra ny andro. Noho izany, ny iray azo averina dia ny manonofy momba ny saka. Efa nitranga taminao ve izany ka tena tianao ho fantatra daholo ny zavatra asehony?
Marina fa tsy maintsy halalinina amin’ny fomba lalina kokoa ny nofinofy. Izany hoe izay rehetra hitantsika ao aminy dia misy dikany na lehibe na kely. Saingy marina fa ny ankamaroan'ny fotoana dia avela irery isika miaraka amin'ny filaharana izay, angamba, dia misy fiantraikany bebe kokoa amintsika. Noho izany, androany isika dia hijery izay lazain'ireo saka ireo amintsika.
1 Inona no dikan'ny hoe manonofy saka
2 Inona no dikan'ny hoe manonofy saka kely maro
3 Dikan'ny hoe manonofy saka ao an-trano
4 Nofy mifoka saka
5 Mahatsiaro ho meow saka
6 Manonofy saka mikaroka anao
Inona no dikan'ny hoe manonofy saka
Noho izany, ary amin'ny ankapobeny, ny manonofy saka dia matetika mitovy amin'ny vintana tsara. Voalaza fa misy ifandraisany amin’ny sehatry ny fitiavana sy ny vola ihany koa. Noho izany, zavatra tsy maintsy hodinihintsika izany. Samy mifamatotra amin'ny nofinofy ireo biby ireo ny fanambinana sy ny fahombiazana. Saingy marina fa ny dikany toy izany dia somary ankapobeny, satria miankina amin'ny zavatra hitantsika amin'ny nofy, ny lokon'ny saka, na misy iray na maromaro, sns., dia mety hampiova kely ny fandikana.
Inona no dikan'ny hoe manonofy saka kely maro
Ity karazana nofy ity dia afaka manana fandikana roa. Amin'ny lafiny iray, rehefa manonofy saka kely isika, dia midika izany ho fiandohan'ny fahafahana vaovao. Fomba iray hampitomboana ny fahaizantsika eo amin'ny sehatry ny asa, indrindra fa tsy hanadino ny mpiasa. Fa mazava ho azy fa miresaka saka kely, saka izay mbola zaza ary mety manana interpretation hafa. Izany dia ny fahatsapanao fa tena marefo ianao ary mila firaiketam-po bebe kokoa noho izay azonao na tadiavinao. Angamba tsy mandalo ny iray amin'ireo fotoana tsara indrindra ianao ary mila olona hanohana anao.
Dikan'ny hoe manonofy saka ao an-trano
Amin'ity tranga ity dia mihevitra isika fa miatrika saka izay tsy antsika fa ao anaty trano. Ka rehefa miezaka miditra ilay biby ka mahazo azy dia azo adika hoe olona maniry izay anananao izany. Raha ankoatry ny fahitana azy ao an-trano, dia mieo, dia milaza aminao fa tsy voahodidin'ny tsara ianao ary misy olona manome tsiky anao, nefa mitady hanindrona antsy ao ambadika.
Nofy mifoka saka
Anisan'ny mahazatra indrindra eo amin'ny fiainantsika andavanandro izany, ka mety hitranga amin'ny nofy ihany koa. Ny fikolokoloana saka dia fihetsika mety hiseho amin'ny nofy ary ho adikantsika amin'ny ambaratonga sentimental. Araka ny milaza fa tena liana amin’ny olona iray isika. Tandremo anefa fa raha safosafoinao izy eo am-pisakafoana dia mety ho ny olon-tianao na ilay olona fantatrao no milalao ny andaniny sy ny ankilany.
Mahatsiaro ho meow saka
Mazava ho azy fa amin'ny fotoana hafa, dia tsy voatery hahita ny saka mihitsy isika. Efa fantatsika fa ny nofy dia aseho amin'ny fomba samihafa, nefa tsy afaka mifehy azy ireo. Noho izany, amin'ity tranga ity, dia mety nisy nanjo anao toy ny mandre saka meow nefa tsy hitanao ilay biby. Eny ary, raha mihaino azy fotsiny ianao dia tsy maintsy milaza aminao izahay fa midika hoe ny olona iray ao amin'ny faribolanao namanao dia tsy miresaka momba anao araka izay eritreretinao. Toa ao ambadikao no manakiana anao mihoatra noho izay ilaina.
Manonofy saka mikaroka anao
Marina fa mety ho be fitiavana ny saka, nefa manana ny toetrany koa izy ireo. ka hatramin'ny amin'ny nofy isika dia afaka mahita na mahatsapa ho voasokajy sy voakaikitry. Eny ary, amin'ity tranga ity, dia tokony ho lazaina fa ny heviny dia mitondra antsika vaovao tsy tapaka: ny olana tonga eo amin'ny fiainanao ary mety ho amin'ny ambaratonga samihafa, na ny fianakaviana sy ny asa na ny fihetseham-po. Fantatrao izao ny dikan'ny hoe manonofy saka!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Mascotas » Fantatrao ve ny dikan'ny hoe manonofy saka?
Body Mist: inona izany, ny fomba fampiasana azy ary ny maro hafa